Nzira Yokutarisira Mutauro Spam Mu Google Analytics - Dzidzira kubva Semalt
Nyanzvi dzeIndaneti dzinopikisa kuti chinhu chikuru uye kutumira spam kupinda kwevashandisi veGoogle Analytics ikozvino chinhu chekare. Google analytics inoratidza ma URL uye mharidzo ye spam seyanoita kana vanokanganisa kana vanonyengedza vachitumira zvinyorwa zvisiri zvenhema kumawebhusayithi asina kuwanikwa uye GA (Google Analytics) nhamba dzekutengesa.
Maererano nenyanzvi inotungamirira kubva kune Semalt , Artem Abgarian, dambudziko iri rinogona kugadziriswa nyore nyore nekushandiswa kwetsvina. Zvisinei, kunyunyuta mashoko acho pachako kunonetsa - cara kerja judi bola.
Nhau dzakaipa kuvashandisi vepaIndaneti, vadzidzisi vepanzvimbo uye vadzidzisi ndeyekuti vatengesi vakabva vadzika kubva kuhupenyu hwemashoko ehupenyu uye kutumira spam. Spammers ikozvino inorova vashandisi veIndaneti nemitauro yemitauro. ISeO Roundtable yakanyora mushumo wevhiki imwe chete yapfuura.
MuGoogle Analytics musimboti, mutengesi unonyengedza unogona kurondedzerwa sehutsotsi hunowanikwa kune imwe nzvimbo yeGoogle Analytics. A "hit" inoreva kushandiswa kwevashandi nenzvimbo inoita kuti kutumirwa kwemashoko kune imwe nzvimbo yeGoogle Analytics. Somuenzaniso, inogona kuva "kuchinja," "kuongorora," "chiitiko," kana "peji pekuona."
Kurwiswa kwenhema kunoumbwa ne bot kana purogiramu panzvimbo yekubatana nemunhu. Pari zvino, zvinobvira kubiridzira chero chekuGoogle Analytics. Izvi zvinoreva spammers inogona kutumira fake zvakananga motokari, fake organic traffic, fake organic traffic, uye fake data kubva pane zvemagariro evanhu. Hackers inogona kutora mapeji mapeji mapeji, zviitiko, hostname, kukumbira URL, transaction item, uye keywords. Uyezve, vanotengesa vanoda Google Analytics ID kuti vaite magic avo matsvina. Zvimwe, vanogona kunyorazve mashoko ekutsvaga kubva kunzvimbo ipi neipi pasi rose uye pasina kuwanikwa kweGoogle Analytics.
Kubvisa Mutauro Spam muGoogle Analytics nekugadzira Hostname Filter
Nyaya yacho inonyanya kubatsira kune vashandisi vaGoogle Analytics vari kuwana mweya uye kutumira spam. Nokudaro, chikamu ichi chichakurukura nzira yekuderedza kana kubvisa matambudziko anokonzerwa nechitsauko cheGoogle Analytics.
Vakawanda vevashandisi veIndaneti vakagamuchira rudzi urwu rwe spam muGoogle Analytics. Saka, vashandi veIndaneti vanogona sei kubvisa izvi spam? Muchirevo ichi, chikamu chinotsanangura kuti sei zita remutauro rinoshandiswa rinogona kushandiswa pakutsvaga zvizhinji zve spam. Tevera matanho ari pasi apa:
1. Enda paIndaneti peGoogle Analytics
Pane peji yeGoogle Analytics, bhura bhatani iri kurudyi uye ukasarudza "Filters".
2. Dzvanya pa Blue ye "Add Filter" Button
Firiji itsva inofanira kugadziriswa pane iyi maonero maererano neGoogle Analytics zvakanakisisa. Inochengetedza imwe yeusfiltered web site yemugwagwa.
3. Gadzira Hostname Filter
Pamusoro peji yeGoogle Analytics, sarudza "Shandisa Firimu Yatsva" kumusoro-kuruboshwe uye shandisa zita reMafuta mumunda wakapiwa. Pasi pe "Fyuta Rudzi" sarudza "Predefined," uye mumamina mana ekuderera sarudza 'shandisa chete'> 'traffic zita remusangano'> rakaenzana, 'ezvo uende muIndaneti URL. Pakupedzisira, famba uchidzokera shure uye uone mazita ekutaurira mazita ekutengesa kwemasayiti. Iva nechokwadi chekubatanidza mazita ose evanhu vanobatanidzwa nechokwadi chenzira kuenda kunzvimbo.
4. Shandisa Site's Filter
Iyo firiji inofanirwa inofanira kutarisira kuendeswa kwemajeri akawanda kunowanikwa panzvimbo ino.